ဒိန်းမတ်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(655 ပျမ်းမျှအားမဲ: 4.00 )5ထဲက
Loading ...1948 ကတည်းက, ဒိန်းမတ်အတွက် Danske Spil ၏နာမတော်အောက်တွင်ပြည်နယ်ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့်လောင်းကစားဝိုင်း၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးလက်ဝါးကြီးအုပ်ရှိ၏။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, တိုင်းပြည်မြေအောက်လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုထွန်းကားပေမယ့်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ 1990 အတွက်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံတရားဝင်ရှိ၏။ Danske Spil နေဆဲထီနှင့်မြင်းပြိုင်ပွဲ, ထီးတပါးပြိုင်ကားများနှင့်ခိုပြိုင်ကားအပေါ်တစ်ဦးလက်ဝါးကြီးအုပ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပေမယ့်အခြား vidiv လောင်းကစားဝိုင်း၏အဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများမှမရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်, ဒါပေမယ့်တချို့န့်အသတ်နှင့်အတူ: နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုသာဖန်တီးရန်နိုင်ငံတွင်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံဖွင့်နိုင်သည် ဥပမာအားတစ်ဦးဒိန်းမတ်ဖက်, အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်နှင့်အတူပူးတွဲကုမ္ပဏီ။
ယနေ့အထိ, ဒိန်းမတ်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်း၏ပုံစံအားလုံးကိုဥပဒေရေးရာဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစား directory ကိုမှဧည့်သည်များအဘို့သတိပြုပါ။ ဒိန်းမတ်အတွက်လောင်းကစားအပေါ်ပညတ္တိကျမ်းဒိနျးမတျလောင်းကစားစျေးကွက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါငျးတို့သစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသတ်မှတ်ထားသည့်။ ဤပညတ်တရား၏ကွပ်မျက်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း, ကိုလည်းလောင်းကစားများ၏ပြဿနာများကိုအဆိုပါဒိန်းမတ်လောင်းကစား (Spillemyndigheden) လိုင်စင်နှင့်အတူဆကျဆံ။
ဇန်နဝါရီလ 1, 2012 ဒိန်းမတ်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏သမိုင်းတစ်ကွေ့အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့ရက်သည် မှစ. အင်အားစုသို့နိုင်ငံအတွင်းလောင်းကစားဝိုင်းထိန်းညှိမယ့်ဥပဒေသစ်ရောက်လာတယ်။ Danske Spil လောင်းကစားဝိုင်းအချို့အမျိုးအစားများအပေါ်တစ်ဦးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလက်ဝါးကြီးအုပ်ထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီရရှိနိုင်လိုင်စင်က်ဘ်ဆိုက်များအထူးသဖြင့်အွန်လိုင်း gamblingin ဒိန်းမတ်,, အားကစားက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဖြစ်လာကြပါပြီ။ ဒိန်းမတ်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအပေါ်ဥပဒေနှင့်အညီ, လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ဦးနိုင်ငံခြားအော်ပရေတာကစမ်းသပ် ယူ. ဒိန်းမတ်အတွက်လိုင်စင်ရရှိရန်အဖြစ်တစ်ဦးအချို့သောကြေးပေးဆောင်ဖို့လိုတယ်, တိုင်းပြည်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ဘူး။
ယခုပင်လျှင်ဥပဒေအသစ်လိုင်စင်အင်အားစုသို့ entry ကို၏ပထမနှစ်တွင်ထိုကဲ့သို့ 25, Bwin နှင့် Ladbrokes အဖြစ်ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာအချို့အပါအဝင်, အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ 888 ပံ့ပိုးပေးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အစိုးရအဆက်မပြတ်နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ရသည့်ဒိန်းမတ်အတွက်လိုင်စင်မဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပါဝင်နေသည်။
ထိပ်တန်း 10 ဒိန်းမတ်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
တိုင်းပြည်ငယ်လေးတစ်ဧရိယာမှာသဘာဝနှင့်သမိုင်းဘဏ္ဍာအရေအတွက်ကိုပဲကျော်မိတ်ဆက်: ဒိန်းမတ်ယမ်ပုလဲရိုးရှင်းစွာဒီမဟုတ်ပါဘူးတောင်းဆိုခဲ့သည်။ SasinoToplists ဒိန်းမတ်၏အရေးအပါဆုံး features တွေအကြောင်းကိုသင်ပြောပြအဖြစ်လောင်းကစားဖို့ Dane ၏သဘောထား။
ဒိန်းမတ် - ပထဝီနဲ့သမိုင်းတစ်နည်းနည်း;
ကာစီနိုခြောက်နိုင်ငံပေါင်း Aalborg, Orhusskae, ညှပ်, Odense, Helsingor နှင့်, သင်တန်း, မြို့တော်, ကိုပင်ဟေဂင်မှာတည်ရှိပါတယ်နေကြသည်;
ဒိန်းမတ်နှင့် Dane အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်များ။
ဒိန်းမတ်ဒိန်းမတ်၏နိုငျငံတျောမှန်ကန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာမြောက်ပိုင်းဥရောပတစ်တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးစကင်ဒီနေးနိုင်ငံတွေ၏တောင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် Jutland ၏ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင်နှင့်ကျွန်းစု၏သေးငယ်ကျွန်းများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်လည်းဖရိုးကျွန်းစုများနှင့်ဂရင်းလန်းတို့ပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းဥရောပတစ်ခုလုံး ", သူ့လက်သီးတှငျကငျြးပခဲ့" ဟုအဆိုပါ 19th ရာစုဒိရှငျဘုရငျတို့သည်အထိ - ဒိန်းမတ်ယခုအချိန်အထိတစ်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်, ထိုသို့တိုင်းပြည်ဟာအလွန်အစွမ်းထက်နိုင်ငံတော်သို့ကြီးအချိန်တွင်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အခုတော့ဖရိုးကျွန်းစုများနှင့်ဂရင်းလန်းလွတ်လပ်ရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ၏မြင့်မားသောဒီဂရီရှိသည်။ 1972 ကတည်းကဒိနျးမတျ Margrethe II ကိုအမည်ရှိ 54-ကြိမ်မြောက်မိဖုရားအုပ်စိုး။
တိုင်းပြည်အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ဥပဒေရေးရာ 1990 အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာများအတွက်လိုင်စင်၏အခြေခံအုတ်မြစ်နိယာမအိပ်လေ၏။ တစ်ဦးလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေးအတွက်အဓိကအခွအေနေ - လောင်းကစားဝိုင်းန်ဆောင်မှုများနိုင်ငံခြားအော်ပရေတာတည်ဆဲဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီနှင့် တွဲဖက်. တစ်ဦးဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ပျက်အဘယ်သို့သောအရာဟိုတယ်မဆို၏အခြေစိုက်စခန်းမှာထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်ဖန်တီးရန်အများဆုံးအဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒိနျးမတျအခြမ်းတွေဖြစ်တဲ့အိမ်နီးချင်းနယ်သာလန်ကနေ "ဟော်လန်ကာစီနို" အဖြစ်အော်ပရေတာ, ဂျာမနီကနေ "မကောင်းပါ Neuenahr" သြစတြီးယားကနေ "ကာစီနိုဂိမ်းသြစတြီးယား" တတျနိုငျသနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်နာ။ ပြည်နယ်အတွက်အခွန်နှုန်းကိုကနှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်၏ 45% မှစတင်သည်အဆိုပါလောင်းကစားရုံအမြတ်အစွန်းပေါ် မူတည်. မြင့်မားသည်။
ယခုအချိန်တွင်မှာတိုင်းပြည်6အဓိကလောင်းကစားရုံရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ Aalborg, Orhusskae, ညှပ်, Odense, Helsingor နှင့်, သင်တန်း, မြို့တော်, ကိုပင်ဟေဂင်တွင်တည်ရှိပါသည်။
ကာစီနိုကိုပင်ဟေဂင်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံမှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအတော်လေးဥရောပလောင်းကစားရုံ 14.00 မှာစတင်သည်နှင့် 4.00 မှာအဆုံးသတ်တွေ့ဆုံရန်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံသာသင်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါ 18 ၏အသက်အရွယ်မှာနိုင်ပါတယ်သွားရောက်ကြည့်ရှု။
နောက်ထပ်မသိမသာကွဲပြား - တံခါးဝကိုသင်ဝင်ပေါက်အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။ 95 နှင့်ယခုနှစ် 12 DKK အတွက် - Day ကိုလက်မှတ်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်, 265 ဒိန်းမတ် kroner (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်€ 2.095) ကုန်ကျသည်။ နွေရာသီ, သင်ဘောင်းဘီတိုများနှင့် Shale အတွက်လောင်းကစားရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအားကစားအဝတ်ကြိုဆိုနေကြသည်မဟုတ်။
တစ်ဦးလောင်းကစားရုံများတွင်ဖဲချပ်ဝေ၏ဂိမ်း, မျက်မှန်ဝတ်ဆင်သည့် iPod ကိုသုံးပါနှင့်အင်္ကျီလက်မပါဘဲတီရှပ်များဝတ်ဆင်မထားသင့်ရုံအခါ။ သို့သော်တစ်ဦးထက်ပိုသောဒီမိုကရေစီ၏အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်. ထိုကဲ့သို့သော WPT နှင့်အခြားအဓိကယှဉ်ပြိုင်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းဖဲချပ်ဝေလောကီသားတို့သည်စီးရီးကာလအတွင်း။
ယေဘုယျအားကိုပင်ဟေဂင်အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအလွန်ရေပန်းစားတို့နှင့်ကြီးသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားတဲ့ (ဥရောပနှင့်အမေရိကန်), slot ကစက်တွေ (140 options များ), ဖဲချပ်ဝေ, Blackjack နှင့် Banco ၏ Punto များအတွက်စားပွဲအမျိုးမျိုးတို့ကို: ဒါဟာတစ်ခုသာလောင်းကစားသမားတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုအလိုရှိ၏နိုငျရာအရာအားလုံးရှိပါတယ်။
အပြင်ရိုးရာစစ်ဆေးရေးခန်းမနှင့်အတူမြို့လယ်မှာရှိတဲ့စံလမ်းလျှောက်, ကပ်လျက်ဒေသများနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးကနေ Little ကမိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း, ကိုပင်ဟေဂင်သွားရောက်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ထူးခြားသောဆွဲဆောင်မှုရန်။
ပြတိုက် "ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ!"။ နေရပ်လိပ်စာ: အဆိုပါ R ကို å dhuspladsen , 57 ။ ခရီးသွားနှင့်စုဆောင်း - ထိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ "! ကြောင့်ယုံကြည်သူကယုံသို့မဟုတ်မ" တစ်ဦးကစုစည်း Leroy Ripley အောက်မှာဒီပုံမှန်မဟုတ်သောပြတိုက်၌တည်၏။ နှစ်တွေကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားမှတ်တမ်းရာပေါင်းများစွာသူအံ့သြဖွယ်အမှုအရာတွေအများကြီးစုဆောင်းခဲ့သည်။ ဒီနေရာတွင် strings နဲ့တောင်ပင်လယ်ကိုပဲရယ်စရာမပါဘဲကစား, အ Taj Mahal တစ်ပွဲတစ်ဦးကြီးမားသော၏အရိုးစုတခုစောင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
"Experimentarium" ပြတိုက်။ နေရပ်လိပ်စာ: Tuborg Havnevej, 7, Hellerup ။ သငျသညျအမြိုးသားတို့နှင့်အတူခရီးသွားသို့မဟုတ်ပဲအားလုံးအတူတူပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေများကိုနားလည်ချင်နေတယ်ဆိုရင် - ကဖွင့်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးဟာရီကိန်းနှင့်ငလျင်လှုပ်နဲ့တခြားဆွဲဆောင်မှုခေါ်ဆိုရန်အမှန်ပြောစစ်ဆေးခြင်းစက်ရှိပါသည်။ အားလုံးပြပွဲထိမိစေနိုင်သည်။
ပြတိုက် "ဂင်းနစ်" ။ နေရပ်လိပ်စာ: Østergade 16 ။ ဒါကပြတိုက်လူတိုင်းသိတယ် ပတ်သက်. ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းများအဖြစ်မရှိမိတ်ဆက်စကားလိုအပ်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်စံချိန်အကြောင်းကိုပဲဖတ်ပါသောအခါ, တခါတရံတွင်သူကစိတ်ကူးရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဒီနေရာတွင်ထက်ပို 500 အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့မှတ်တမ်းများပြပွဲနှင့်သည် "ပြပွဲရှာတှေ့နိုငျ ဘာသာရေးရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်» သငျသညျ, သင့်အရိပ်ဖမ်းဆန့်ကျင်ဘက်ထိုင်သူတစ်ဦးနှင့်အတူဦးခေါင်းဖလှယ်ခြင်းနှင့်ပင်လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်၌ထိုင်ဖို့နိုင်ပါတယ်။
ပန်းခြံ "Tivoli" အပန်းဖြေ။ နေရပ်လိပ်စာ: Vesterbrogade3။ ဒါဟာအပန်းဖြေပန်းခြံလမ်းဖြင့်, သူသည် Disneyland ကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်တစ်ချိန်ကဝေါ့ဒစ္စနေးမှုတ်သွင်း, ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ supernavorochennogo ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခမ်းအနားနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏အလွန်ပျူငှါနွေးထွေးသောလေထုလည်းမရှိ။
"Erotica" ပြတိုက်။ နေရပ်လိပ်စာ: Kobmagergade 24 ။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးခေါ်ဆောင်သွားပြတိုက်ဖြစ်ပါသည်, သူ 1992 အတွက်ထင်ရှား။ , ဒီနေရာတွင်ပစ္စုပ္ပန်နေ့တိုင်အောင်ရှေးခေတ်ရောမမြို့နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတည်းကကာမဆီသို့ဦးတည်သဘောထားတွေများ၏သမိုင်းခြေရာကောက်နိုင်ပါတယ်။ ပန်းချီ, ပန်းပု, ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားအတွင်းခံများနှင့် sadomasochistic ဦးတည်ချက်ကနေ devices များအားလုံးအမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ 18 နှစ်ပေါင်းအတူသိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက် Login ပေမယ် 50% တစ်ဦးလျှော့စျေးနှင့်အတူကျောင်းသားများအတွက်။
ဒိန်းမတ်နှင့် Dane အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ရပ်မှန်များ
အဖြစ်အစောပိုင်း 8 နံနက်အဖြစ် Dane အလုပ်လုပ်သွားပါ, 16.00 မှာကင်းလွတ်ခွင့်ရသည် - ပြုပြင်နေ့ကအစောပိုင်းစတင်သည်။ အဆိုပါ Dane တနင်္ဂနွေကိုကျော်ဝယ်ယူအဓိကထုတ်ကုန်လုပ်နိုင်အောင်အရောင်းဆိုင်များကိုလည်းစောစောစီးစီးပိတ်ပစ်;
43% ပျမ်းမျှ - ဒိန်းမတ်ဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့အခွန်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာနိုင်ငံသားများ၏ဝင်ငွေအဆင့်ပေါ်နှင့်သူ့ကိုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးများ၏မူတည်;
အလုပ်မှာတိုင်း Dane သုံးအစားအစာများတစ်နေ့လျှင်ရရှိသွားတဲ့။ ဒိနျးမတျမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး, ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအစဉ်အလာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထမင်းစားခန်းနဲ့ချက်ပြုတ်ရေးရှိပါတယ်;
မိန်းမနှင့်အညီအမျှအိမ်မှုကိစ္စဖျော်ဖြေဒိန်းမတ်ယောက်ျား။ သူတို့ကကြမ်းပြင်ကိုဆေးကြောသားသမီးများ၏စောင့်ရှောက်မှု ယူ. အရသာတစ်ခုခုချက်ပြုတ်ဖို့စိတ်ထဲမထားပါဘူး။
ဒိန်းမတ်အိမ်ခြံမြေအတော်လေးစျေးကြီးဤသို့မကြာခဏအရည်အသွေးညံ့ဖျင်း၏ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမြို့ရိုး၏ခါးဆစ်, တခါတရံမကအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအများဆုံးတိုက်ခန်းများအတွက်နေရာယူပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဒိန်းမတ်, အခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်, တစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ခုချင်းစီကိုမိသားစုဆရာဝန်မှလူနာတစ်ဦးအခြို့သောအရေအတွက်ကိုတွဲ။ ဒါကနယ်မြေအခြေခံပေါ်မှာပြုသောအမှုသည်, သငျသညျကိုရွှေ့သွားကြသည်, အဲဒီနောက်ဆရာဝန်ကိုပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်လျှင်,
ဒိန်းမတ် - စက်ဘီးလူမြိုးတစျမြိုး။ သူတို့ကအလွန်ချစ်ပြီးတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
ဒိန်းမတ်၏စံနမူနာတွင်, သင်အလုပ်တခုကိုတစ်ကယ့်ကိုဆွဲဆောင်မှုလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖန်တီးဖို့လျှင်လိုကျနာသငျ့ရာလမ်းကြောင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Dane, ထိုအတော်လေးအေးဆေးတည်ငြိမ်စိတ်ထားနေသော်လည်း, လောင်းကစားရုံများတွင်အချိန်ဖြုန်းဖို့စိတ်ထဲမထားဘူး, ထိုအဘို့ကိုသူတို့ရှိသမျှသည်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ဒိန်းမတ်အတွက်လောင်းကစားရုံသည်ခြေလှမ်းမှာပြုလုပ်မပါလျှင်ကျနော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ထိန်းညှိလိုင်စင်ထုတ်ပေးလျက်, နှစ်ခု applications များဆိုင်းငံ့ကြသူသာ7အော်ပရေတာရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုပင်လောင်းကစားရုံ၎င်း, Dane ၏လောင်းကစားဝိုင်းဦးစားပေးကျေနပ်အောင်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ စကားမစပ်, ဒိန်းမတ်, အကအကြောင်း5လူဦးရေသန်းမှအိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်,7လောင်းကစားရုံအနိုင်နိုင်ဧည့်သည်များ၏ရောက်လာအတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်။ သင်ဤအံ့သြဖွယ်နိုင်ငံကသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းများမှာလျှင်, အဲဒီမှာတပါးလောင်းကစားရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သေချာစေပါ။ လောင်းကစားထူထောင်မှုကိုမကြာခဏပင်ပဲသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဟိုတယ်အဆောက်အဦ, သမိုင်းသုံးလပတ်အတွင်းတည်ရှိသောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေကြသည်။
Aarhus ခုနှစ်တွင်ဒိန်းမတ်အတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့, အလှဆုံးဒိန်းမတ်လောင်းကစားရုံများထဲမှလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ကြော့အတွင်းပိုင်းအဘို့မသာလူသိများပေမယ့်လည်းဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးသည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦလည်းတည်ရှိသည်နှင့်နာမည်ကြီးတွေနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့လူတွေနေဖို့လိုသည့်ဇိမ်ခံဟိုတယ်ဟိုတယ်တော်ဝင်, ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်များ၏ဧရိယာ၌မြောက်မြားစွာသမိုင်းဆိုင်ရာဆိုဒ်များရှိပါတယ်။ တစ်လူသိနှင့်လက်တင်ရပ်ကွက်က၎င်း၏မြစ်ကဖေးများနှင့်စျေးဆိုင်များနှင့်အတူလည်းရှိပါသည်။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံများတွင်ရရှိနိုင်ပါဂိမ်းအဖြစ်ကစားတဲ့, Blackjack နှင့်ဖဲချပ်ဝေပြက်လုံးမှာအလောင်းအစားအနည်းငယ်စားပွဲတည်ရှိနေကြသည်။ ခန်းမ၌သငျ 80 ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားစက်တွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ မကြာခဏလောင်းကစားရုံ၏နံရံအဓိကဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်။
အဆိုပါဆွဲဆောင်မှုဒိန်းမတ်, ကယင်း၏မြို့အသီးအသီးများနှင့်မသာမြို့တော်ခရီးသွားဧည့် captivate နိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ တဦးတည်းအပေါငျးတို့သကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုပင်ဟေဂင်မှာတည်ရှိပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းယူဆမယ်လို့ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ အများဆုံးပျော်စရာလောင်းကစားဝိုင်းတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာ Aalborg ၏မြို့အတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ မြို့အလယ်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဟိုတယ်အဆောက်အဦးနှင့်တစ်ဝှမ်းတွင်တည်ရှိပြီးမလိုလားအပ်သောလောင်းကစားရုံအမြဲဘဝကိုအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ အတော်များများကကလပ်, ပျူငှါနွေးထွေးသောအရက်ဆိုင်များနှင့်အသေးစားစားသောက်ဆိုင်တွေကတော့၏ပျင်းပရိသတ်တွေရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ၌သငျကစားတဲ့, ဖဲချပ်များနှင့်အခြားကဒ်ဂိမ်းတော်တော်များများအမျိုးအစားများကိုကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တိုးတက်သောထီပေါက်အပါအဝင်ထက်ပို 30 slot နှစ်ခုအတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
သို့သျောလညျး, ဒိန်းမတ်၏အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံင်း၏မြို့တော်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာနှစ်သစ်ကူး၏အကြိုအပေါ် 1990 ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်အတွင်းပထမဆုံးတရားဥပဒေဆိုင်ရာလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျလောင်းကစားရုံဖျော်ဖြေရေးအများဆုံးရွေးချယ်မှုလိုအပ်တယ်လျှင်, သင်ကိုပင်ဟေဂင်ကရှာနေ start ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများအပြားကဂိမ်းကစားစားပွဲများစွာကျော်တရာ slot နှစ်ခုသင့်ရဲ့အကြိုက်တစ်ဂိမ်းကိုရှာဖွေခွင့်ပြုပါ။ စကားမစပ်အကြီးမားဆုံးဖဲချပ်ဝေဖြစ်ရပ်များမကြာခဏဤအဖွဲ့အစည်း၏နံရံအတွင်းစည်းရုံးနေကြပါတယ်။ ကာစီနိုကိုအကောင်းဆုံးဟိုတယ်ရှိတဲ့ Radisson Blu ယမ်မြို့တော်တွေထဲက၌ကျိန်းဝပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်ဘာပျေါမှာအမြင့်မားဆုံး - ဤတွေ့ရှိချက်များ, လက်ထက်, ဝင်ငွေပျမ်းမျှအဆင့်ဒိနျးမတျသောလူဦးရေပိုမိုတိုတောင်းအလုပ်လုပ်နာရီဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ပေမယ့်နိုင်ပါသည်။
(ကအားလုံးကိုမှာတည်ရှိလျှင်) ၎င်းသည်အောင်မြင်မှုတစ်ခုပုံသေနည်းတူပေမယ့် Dane Lego မှများ၏စုရုံးမှုအတွက်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အခမဲ့အချိန်ကိုမဖြုန်းခဲ့ပါ။
မတိုင်မီကဇန်နဝါရီလ 1, 2012 ဖို့အစိုးရပိုင် Danske Spil အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လိုင်စင်ပိုင်နှင့်နှုန်းထားများထဲကသယ်ဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒိနျးမတျနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၏၏ကျန်လောင်းကစားဖျော်ဖြေရေးနှင့်အားကစားလောင်းကစားပူဇော်ဖို့ခွင့်မပြုထားခဲ့ကြသည်။ ပညတ္တိကျမ်းစနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, နှင့်အားကစားထက်ပို 400 ကို web sites များဟာ Dane ထံမှကစားနည်းယူအလောင်းအစားရှိသောကြောင့်ဒေသခံအစိုးရ, ရေးရာ၏ဤပြည်နယ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကအရင်းအမြစ်များကိုပင်လွယ်ကူသည်အသုံးပြုသူများဖြစ်စဉ်ကိုလောင်းကစားအဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါဒိန်းမတ်ဘာသာစကားပူဇော်ကြသည်။
ပြည်နယ်စင်ကြယ်သောကံအပေါ်အခြေခံပြီးထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လောင်းကစားများ၏လူမျိုးအပေါ်ကစားနည်းအပေါ်လက်ဝါးကြီးအုပ်, ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်းနယူးဥပဒေများ, ထိုကဲ့သို့သော Ladbrokes နှင့် bet365 အဖြစ်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးခွင့်ပြုပါ။ ကစားသမားတစ်ဦးမဟာဗျူဟာသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုမသုံးပါဘူးရှိရာထိုကဲ့သို့သောခြစ်ကတ်များနှင့်ဘင်ဂိုကစားအဖြစ်ဂိမ်းများ, ကိုရည်ညွှန်းသည်သာအခါသမယပေါ်တွင်မူတည်သည်။
လောင်းကစားကုမ္ပဏီ Danske Spil င်ငွေကိုစုစည်းပြီးနှင့်လုပ်ဆောင်သွားရန်သီးသန့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုနေသော်လည်းအဆိုပါဥပဒေပြဌာန်း၏ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်သိသိသာသာတိုးလာနှင့်ယခုကုမ္ပဏီနှစ်ခုသို့ကွဲပြား: Danske ထီ Spil နှင့် Danske Licens Spil ။ အဆုံးစွန်သောအွန်လိုင်းဂိမ်းကဏ္ဍကိုဖုံးခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 60% အားဖြင့်ဝင်ငွေတိုးမှတ်တမ်းတင်ထားသောသိရသည်။
ယနေ့ Dane လောင်းကစားဝိုင်းအဘို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိသည်။ သူတို့ကကမ္ဘာတဝှမ်းကအခြားကစားသမားများဆန့်ကျင်ထိုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းဖဲချပ်အဖြစ်ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒိနျးမတျအစိုးရခံမှုရှိတဲ့တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေသည်ပြည်ပမှာတည်ရှိသောကြော်ငြာနှင့်လိုင်စင်ကုမ္ပဏီများသည်သက်ဆိုင်သည်။
အများဆုံးဥရောပတိုက်သားလိုပဲ Dane ဘောလုံးကိုချစ်ပြီးပြည်တွင်းစူပါလိဂ်အသင်းတွေအများကြီးပေါ်၌ထားလေ၏။ အင်ျဂလိပရီးမီးယားလိဂ်ကြောင့်ကမကြာခဏဒိနျးမတျဂြိုဟ်တုပေါ်ပြဆိုတဲ့အချက်ကို (Dane 280 ၏ 380 ရာသီနှုန်းကိုက်ညီတွေ့နိုင်ပါသည်) အားလည်းအလွန်ရေပန်းစားသည်။
မကြာသေးမီကအဓိကအား, သောမတ်စ် Bern ၏အောင်မြင်မှုကိုမှကျေးဇူးတင်စကားဂေါက်သီးအတွက်အကျိုးစီးပွားတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Young ကကစားသမားTorbjörn Olesen, ပုံ, ပရိတ်သတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ လက်ပစ်ဘောလုံးနှင့်ကြက်တောင်စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ "Tour de France" ၌ဆုအနိုင်ရသူကိုကမ္ဘာ့အဆင့်မီစက်ဘီးစီးသူနှင့်အတူ, စဉ်ဆက်မပြတ်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ Dane လည်းလွန်ကဲကဲဖဲချပ်စွဲ။ အွန်လိုင်းဖဲချပ်ရဲ့လူကြိုက်များအစောပိုင်း 2000s အတွက်ဖဲချပ်ဝေတဲ့နေရာမှာဂု Hansen ၏ချန်ပီယံအတွက်အောင်ပွဲပြီးနောက်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားစပြုလာသည်။ ဒိန်းမတ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖဲချပ်ဝေကစားသမားတွေအများကြီးမှာတော့တိုင်းပြည်ဟာကမ္ဘာ့အဆင့် WSOP အတွက် 25th အဆင့်။ ရပ်ရွာဒိန်းမတ်လောင်းကစားထိုကဲ့သို့သောပါတီ Poker အဖြစ်အချိန်-စမ်းသပ်ပြီးဖဲချပ်က်ဘ်ဆိုက်များကြိုက်နှစ်သက်သည်။
ဒိန်းမတ်အတွက်လောင်းကစားအဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းကဏ္ဍ၏ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စုစုပေါင်းဝင်ငွေ4ဘီလီယံခန့် DKK ပမာဏဥပဒေသစ်များ၏နိဒါန်းပြီးနောက်လျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။
သို့သော်အစိုးရသည် Dane မှန်ဆောင်မှုများပေးလိုင်စင်မဲ့နိုင်ငံခြားလောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သာ 2012 အတွက် 57 က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အမည်ပျက်စာရင်းတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဒိန်းမတ်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ဆယ်စုနှစ်များစွာပြီးနောက်, Danske Spil ကုမ္ပဏီဆဲစျေးကွက်၏ 62% ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အခြားကစားသမားများအဘယ်သူ၏န်ဆောင်မှုဒိနျးမတျလူဦးရေရဲ့အများစုသုံးစွဲဖို့အသုံးပြုကြသည်ဘွတ်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါလိမ့်မည်မှီကအချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။
0.2 ထိပ်တန်း 10 ဒိန်းမတ်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.1.2 ဒိန်းမတ်နှင့် Dane အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ရပ်မှန်များ
4.2 လောင်းကစားရုံ Aalborg
ဝဲ Lotto3ကစား